दुई हप्ताका लागि शहिदनगर वडा नं.८ मा लकडाउन गरियो ! | अपन जनकपुर
दुई हप्ताका लागि शहिदनगर वडा नं.८ मा लकडाउन गरियो !
विपिन कुमार यादव ,जनकपुरधाम : धनुषाको शहिदनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ लाई आजदेखि दुई हप्ताका लागि लकडाउन गरिएको छ ।
कोरोना संक्रमितको मृत्यू भएको र संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि वडा कार्यालयले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो । वडाध्यक्ष तनुकलाल कुसियैतले लकडाउनको अवधिमा अतिआवश्यक काम बिना घरबाहिर ननिस्किन अपिल जनतासँग गरेका छन् ।
वडा नम्बर ८ मा लकडाउनको अवधीमा पसलहरु संचालनमा गरेको पाइएमा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ । वडाध्यक्ष कुसियैतले मदिरा पसल संचालन गरेमा ५ हजार ५१ र अन्य पसललाई १ हजार जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।